Ny Fitiavana Lehibe Indrindra Rehetra — Trip LEE - OFISIALY SITE
Ny olona rehetra te-ho tia. Na isika manaiky izany na tsia, isika rehetra manana izany faniriana voajanahary hahatsapa niankohoka sy nankasitraka ny olon-kafa. Maro amintsika no mandany ny fiainany manontolo ny olona iray mitady ny ho tia antsika, amin'ny fanantenana fa misy olona- na iza na iza- dia fahafaham-po izany faniriana ao anatiny.
Tsara raha mieritreritra ianao ny amin'ny olon-tiany ny tenanao intsony amin'izao fotoana izao ary manantena fa ianao ianao fahafaham-po izany faniriana farany, Tiako ho fantatrareo fa ny tanjona dia ambany loatra. Tsy hahita ny lehibe indrindra ny fitiavana ny rehetra amin'ny jiro mazava sakafo hariva anio alina. Na izany aza, misy mahery indrindra, mahafa-po rehetra, fitiavana tonga lafatra misy anareo. Misy Andriamanitra, izay tia anao mihoatra noho ny azonao an-tsaina mihitsy. Ny fitiavany dia tsy miova, ary ianareo tsy ho Woo Azy, na miasa ho azy.
Antsika ve Andriamanitra Fitiavana?
Fantatro indraindray maro amintsika na tsy hanontany tena raha tena tia antsika Andriamanitra. Toa izany lavitra. Ary angamba isika Te misalasala intsony raha toa ka nanao zavatra mba ataovy mazava tsara ho antsika. Ny fahamarinana isika, Izy efa manana. Hoy ny Baiboly, "Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, Maty hamonjy antsika Kristy.”
Ary hoy indray izy, "Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, ka nomeny ny Zanany Lahitokana, fa na iza na iza mino Azy mba tsy ho very, fa hanana fiainana mandrakizay.”
Andriamanitra dia efa naneho ny fitiavany antsika amin'ny fomba tsy mampino, ny fanomezana ny Zanany ho antsika. Aza mandà ny fanehoam-pitiavana lehibe indrindra ao amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Aza mandà ny tia ny fanahinareo. Fa tsy handray ny fitiavana amin'ny alalan'ny matoky an'i Jesosy.
Ho an'ireo antsika izay nino Azy, tsy misy na inona na inona eo amin'izao tontolo izao izay afaka mihitsy hahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ary ny fitiavany ny olony betsaka, fa afaka manao na inona na inona mba tsy hahatonga antsika ho tia Azy mihoatra noho izy efa manao.
Dia toy izany hatrany izany andron'ny mpifankatia, handray am-po fam. Tsy maintsy mijery intsony. Andriamanitra tia anao lalina ny
Dj Mas na Samsona • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:37 aho • navalin'i
Misaotra Trip Lee ianao dia tena Inspiration amin'ny fiainako Andriamanitra anie hitahy anao!!!
Violetchirwa • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:38 aho • navalin'i
aho dia tached
Carolyn • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:38 aho • navalin'i
trữ izay, ny anadahiko. Mahafinaritra ny mahita ny manaraka Gen maka ny antony. Andriamanitra anie hanitatra ny faritany sy ny fitarihana ho Azy.
Andao hivavaka ho an'ny hafa rehefa mikatsaka ny hankatò Azy.
Kathy Washington7 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:38 aho • navalin'i
Tiako enao, Triplee!!! Rehefa comin’ ny Port?????
Kayla:) • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:38 aho • navalin'i